Bogga ugu weyn / Mashiinka Sifeynta Induction / Mashiinka Aluminium Aluminium ee Daaweynta leh kuleylka kuleylka
Category: Mashiinka Sifeynta Induction Tags: aluminium ayaa qarin kara, aluminium aluminium wax lagu shaabadeeyo, aluminium aluminium xirashada induction, aluminium alwaaxa, Mashiinka alwaaxa aluminium aluminium, soo iibso qalabka wax lagu dhejiyo, Mashiinka wax lagu xiro, mashiinka daboolka daboolka, mashiinka wax lagu xiro ee elektromagnetic, Qalabaynta enercon induction, Mashiinka wax lagu xiro, kuleyliyaha kuleylka, Difaaca daboolka, mashiinka wax lagu xiro, Qalabaynta induction, sicirka sariirtaada induction, qufulka induction, Mashiinka wax lagu xiro, mashiinka tolidda
Waa maxay "Induction induction aluminium aluminium alwaaxa"?
Induction Aluminium Aluminium Sifeynta Mashiinka waxaa loo isticmaalaa PP, PE, PET, PS, ABS, HDPE, LDPE iyo dhalooyinka dhalada ah, oo adeegsada mabda elektromagnetic si loo soo saaro kuleylka degdega ah ee dhalaalaya aluminium aluminium ka dibna u hoggaansamaya furitaanka dhalooyinka, iyadoo la gaarayo ujeeddada caddaynta qoyan , Dheecaan-bixiye, caariyaysi-caddeyn iyo kordhinta waqtiga ilaalinta.
Nooca guud ee shaabadda gudaha ayaa ah 2 xabbadood oo gudaha ah oo ka tagaysa shaabad labaad gudaha daboolka markii la saaro shaabadda indho-indheynta. Tan waxaa badanaa loo isticmaalaa halka arrimaha ka bixitaanku ay khuseeyaan. Ikhtiyaar kale ayaa ah shaabadda halbeegga ah ee gudaha isla marka halbeegga indha-indheynta laga saaro ma jiro xariijin ku haray xiritaanka Waxa kale oo aad ka dooran kartaa shaabadood leh jiido ama kuwa leh shaabad la huwiyo oo aan hadhaaga ku reebin dhalada. Waa inaad hubtaa in safku uu la jaan qaadayo dhalada.
Product Waxyaabaha ahama Steel
Ballaca dhejiska 60-180mm 50-120mm 15-60mm
Xawaaraha xiritaanka Dhalooyinka 20-300 / min
Xawaaladda Beddelka 0-12.5m / min
Dhererka dhererka 20-280mm 20-180mm
Max Awoodda 2500W 1800W 1300W
danab Input Marxalad keli ah, 220V, 50 / 60Hz
Waxyaabaha la isticmaali karo PP, PE, PET, PS, ABS, HDPE, LDPE iyo dhalooyinka quraaradaha ah, Afka caaga ah ee afka aluminium loogu talagalay filimka
Dhererka (L * W * H): 1005 * * 440 390mm 970 * * 515 475mm
Miisaanka 72kg 51kg 38kg
Waa maxay Induction Sealing?
Daabacista isugeynta waa hab aan xiriir la lahayn oo ah waxyaabaha isku xidha oo laga sameeyay thermoplastics iyada oo loo marayo indho-indhaynta elektromagnetic-ka taas oo soo saareysa qulqulo eddy ah si loo kululeeyo qalabka. Warshadaha baakadaha, nidaamkan waxaa loo isticmaalaa in si hermetically ah loo xirxiro daboolka weelka oo leh kuleyl lagu dabooli karo lakabka kuleylka. Marka laga hadlayo Qalabkayaga Qalabka Induction Induction Aluminium, foornada laminate waa shaashadda soosaarida kuleylka ee aluminium.
Mashiinnada baakadaha waxaa loo isticmaalaa in si hermetically ah loo shaabadeeyo dhalooyinka iyo weel caag ah iyada oo loo marayo daboolka indho-indheynta si loo dheereeyo nolosha alaabada, looga hortago qulqulka, iyo gaar ahaan gaar ahaan in la bixiyo shaabadyo aan caddayn. Soosaarida aluminium ee aluminiumku waxay mashiinnada mashiinnada ka heli kartaa qalab koronto ku shaqeeya, gacan-qabsi ah, iyo naqshad gacmeed lagu xirayo cabbirka xiritaanka ee kala duwan.
Waa maxay Qalabka Induction Aluminium ee kuleylka ah?
Waxaad aragtay waxyaabahan oo daboolaya weelasha dhalada iyo weelka marka aad furto badeecad baakadeysan sida subagga looska ama daawooyinka dhalada ku jira. Qalabka aluminium ee kuleylka kuleylka waa shaashad lacag ah oo ku taal furitaanka weel taas oo caddaynaysa in sheyga la soo duubay uu yahay mid muuqda. Waxay ubaahanyihiin aluminium aluminium induction ah oo dabooli kara qalabka si sax ah ugu xir xirmooyinkaan daasadda.
Intaa waxaa sii dheer, aaladda aluminium ee kuleylka kuleylka caadiga ah ee gudaha daboolka waa shaabad isku dhafan oo ka kooban qaababka istaraatiijiyadeed ee soo socda ee qaabeysan:
Lakabka xaashida saxarka
Lakabka aluminium aluminium
Lakabka ugu sarreeya, kaas oo ah lakabka warqadda saxarka, wuxuu buulal ka samaystaa qaybta daboolka gudaha waana ku dhagan yahay. Waxaa ku xiga lakab ah wax loo isticmaalay in lagu xidho lakabka xaashida saxarka ah lakabka saddexaad, aluminium aluminium, oo ah lakabka ku dheggan weelka. Lakabka ugu dambeeya xagga hoose waa lakabka polymerka oo u eg filim caag ah.
Afartan lakab ayaa si wada jir ah u wada shaqeynaya si loo gaaro firfircoonida lagama maarmaanka u ah geeddi-socodka ku-guuleysiga soo-saarista si loo soo saaro shaabad hawo-qaadasho ah.
Codsiyada Kala-saarida Induction
HLQ aluminium aluminium mashiinnada wax lagu xiro daboolida koofiyadaha ayaa ku habboon in lagu xiro cuntada, cabitaanka, wax soo saarka caafimaadka, iyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyo kuwa kale oo leh qaabab kala duwan oo dhalo ah, sida dhalooyinka wareega iyo kuwa laba jibbaaran, oo ka sameysan caag.
Intaas waxaa sii dheer, hoos waxaa ku yaalo warshadaha iyo wax soo saarka kala duwan ee LPE ay mashiinnada ku tolan karaan.
Warshadaha sharaabka Khamri, biir qasacadaysan, Soodhaha, Biyaha, Cider, Casiirka, Kafeega iyo Shaaha, Sharaabyada Kaarboon
Industry Cuntada Hilibka, Cuntada badda, Khudaarta, Miraha, Suugada, Jam, Tuna, Maraqa, Cannabis, Honey, Powder nafaqada, Cunto qalalan (sida lowska, badarka, bariiska, iwm)
Warshadaha dawooyinka Sahayda caafimaadka xoolaha, Sahayda Caafimaadka, Boodhadhka, Kiniiniyada, Qalabka cayriin ee dawooyinka
Warshadaha Kiimikada Saliidda wax lagu karsado, saliidda Lube, Xabagta, Rinjiga, Kiimikooyinka Beeraha, Dareeraha Nadiifinta, Dheecaanka iyo waxyaabaha la marsado, Qashinka nukliyeerka iyo walxaha shucaaca ka shaqeeya, dareeraha baabuurta (baatrool, saliid, iyo naaftada)
Sidee Aluminium Aluminium Wax-u-qabashada Mashiinka Daboolku u Shaqeeyaa
Nidaamka daboolka indha-indheynta wuxuu ku bilaabmayaa iyadoo la siinayo isku-darka weelka dusha sare ee badeecada horay loo soo buuxiyay ee aluminium-ka soo-saarista mashiinka. Daboolka ayaa horey u lahaa aluminium aluminium ah lakab induction induction ah oo la dhex geliyay ka hor inta aan la dhigin weelka.
Isku darka weelka daboolka wuxuu hoos maraa madaxa badmareenka, kaas oo sii deynaya aaladda elektromagnetic-ka ee oscillating, iyada oo loo sii marinayo gawaarida wareejinta. Markay dhalada ka gudubto madaxa badmareenka, aluminiumka aluminiumka lakabka induction induction wuxuu bilaabmaa inuu kululeeyo sababtoo ah qulqulka qulqulka. Lakabka wax-soosaarka, oo ah lakabka labaad ee safka soo-gelitaanka, wuu dhalaalaa waxaana ku liqaa lakabka ugu sarreeya - lakabka xaashida saxarka.
Markay lakabka dhukku gabi ahaanba dhalaalay, lakabka saddexaad (lakabka aluminium aluminium) ayaa laga siidayaa daboolka. Lakabka ugu dambeeya ee lakabka, polymer lakabka, sidoo kale wuxuu kululaadaa oo ku dhalaalaa bushimaha weelka caagga ah. Marka polymerka uu qaboobo, xiriirka ka dhexeeya polymerka iyo weelka ayaa abuuray shey si hermetically ah loo xiray.
Nidaamka wax lagu xidho oo dhan saamayn taban kuma yeesho sheyga ku jira weelka. In kasta oo ay suurtagal tahay in kuleylka kululaado uu dhaco taas oo waxyeello u geysata lakabka shaabadda oo keena cillad khaldan. Si tan looga fogaado, LPE waxay ku sameeysaa kormeer tayo sare leh iyada oo loo marayo geedi socodka wax soo saarka oo dhan ee aluminiumka aluminium ee loo habeeyay qalabka qalabka.
Kahor nidaamka wax soo saarka, waxaan kula sameyneynaa wadatashi ballaaran si aan si sax ah u fahamno baahiyahaaga. Tani waxay gacan ka geysaneysaa go'aaminta nidaamka habboon ee lagama maarmaanka u ah in lala tacaalo badeecad gaar ah sida mishiinka loo baahan yahay si loo hubiyo khadadka baakadaha ee aaminka ah.
Aluminium bireed Aluminium leh Induction
Kuleylka kuleylka siligga Induction
kuleylinta Kuleylka kuleylka aluminium
induction preheating aluminium giraangiraha rinjiyeynta